Waa maxay Nidaamka Maareynta Qandaraasyada? Sidee caan u yihiin? | Martech Zone
Waa maxay Nidaamka Maareynta Qandaraasyada? Sidee caan u yihiin?
Talaado, Agoosto 15, 2017 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Guga sanadkii saddexaad ee SpringCM Xaaladda Maamulka Qandaraasyada, waxay soo wariyeen in kaliya 32% jawaabeyaasha sahanku ay isticmaalayaan xalka maareynta qandaraaska, oo 6% ka badan sanadkii hore.
Nidaamyada Maareynta Qandaraaska siiso urur habab si ammaan ah loogu qoro ama loo soo rarro qandaraasyo, loo qaybiyo qandaraasyada, loola socdo dhaqdhaqaaqa, loo maareeyo tifaftirka, otomatiga habka oggolaanshaha, iyo wadarta guud ee qandaraasyada warbixinta.
Maaha wax lala yaabo, laakiin waa wax laga naxo in shirkado badan oo badan ay qandaraasyo ku soo diraan emayl. Xaqiiqdii, Guga CM wuxuu soo wariyay in ka badan 85% shirkadaha inay wali heshiisyo ku xiraan emaylka. 60% jawaabeyaasha sahanku waxay sheegeen inay ku maareeyaan nidaamka qandaraaska oo dhan emayl. Tani waa dhib laba sababood:
Emailku waa ma farsamo gaadiid aamin ah. Faylasha si fudud ayaa loo aqoonsan karaa oo looga soo dejisan karaa noodhadhka shabakadaha lala socdo meel kasta oo udhaxeeya qaatayaasha ay jabsadaan.
Shirkaduhu way badan yihiin fog ama xoogaga iibinta ee socdaalka, taasoo la micno ah inay badanaa ka shaqeeyaan amni daro, shabakado furan oo aan ilaalin amniga laakiin laga yaabo inay kormeeraan kuwa kale.
Ururada adeegsada maareynta qandaraaska, ku dhowaad afartiiba hal (22%) ayaa dhaha yareynta halista waxay ahayd muhiimadooda. In kasta oo ururo badani ay u dhaqaaqayaan dhinaca otomaatigga hawlahooda qandaraaska, inbadan ayaa wali ku dhibtoonaya buug gacmeed, ku dhaqanka heshiisyada aan sugnayn. Aaladda otomatiga ah ee hawsha maaraynta qandaraaska oo dhan waxay soo bandhigeysaa fursad muhiim ah oo loogu talagalay wareegga wax-ku-oolnimada wax-ku-oolka ah, waxayna baabi'ineysaa caqabadaha iyo halista la xiriirta socodka shaqooyinka gacanta. Ganacsiyada si guul leh u doorta una hirgaliya xalalka maaraynta qandaraaska waxay u badan tahay inay la kulmaan dakhli koror iyo khaladaad yar oo la xiriira qandaraaska.
Qandaraasyadu waa halbowlaha ururada badankood, laakiin heshiisyadu badiyaa way istaagaan markii ay ku dhacaan marxaladda qandaraaska. Taasi waa sababta aan u baareyno caqabadaha la xiriira habka maaraynta qandaraaska. Ujeedadayada daraasaddan ayaa ah inaan siinno go'aan-qaadayaasha aragtiyo waxqabad leh si ay u horumariyaan geeddi-socodkooda maaraynta qandaraaska Will Wiegler, madaxweyne ku xigeenka sare iyo CMO ee SpringCM
Warbixinta oo dhameystiran ayaa muujineysa fikradaha ku saabsan qaadashada tikniyoolajiyadda ee nidaamka maareynta qandaraaska iyo sidoo kale natiijooyinka hirgelinta nidaamka maamulka qandaraaska. Waxaan kudarey sii deynta hoose macluumaad dheeri ah.
Degso Xaaladda Maamulka Qandaraasyada
Ku saabsan SpringCM
SpringCM waxay ka caawisaa socodka shaqada adoo u keenaya maareyn dukumiinti casri ah iyo madal hawleed, taas oo awooda hogaaminta maaraynta meertada nolosha (CLM) arjiga. SpringCM waxay awood u siineysaa shirkadaha inay noqdaan wax soo saar badan iyagoo yareynaya waqtiga ku qaatay maareynta dukumiintiyada ganacsiga muhiimka ah. Hawsha caqliga leh, ee otomaatiga ah waxay awood u siineysaa wada shaqeynta dukumiintiyada guud ahaan hay'ad kasta oo ka socda desktop ama aalad moobil ah. Lagu soo gudbiyey iyada oo loo marayo nabadgelyo, dariiqa daruuriga ah, dukumintiga 'SpringCM' iyo xallinta maaraynta qandaraaska si aan kala go 'lahayn ugu dhex milmaan Salesforce, ama u shaqeeya sidii xal keli ah.
Tags: maaraynta meertada noloshaqandaraaska noloshamaaraynta heshiiskanidaamka maamulka qandaraaskasocodka qandaraasyada socodkagugacmxaaladda maaraynta qandaraaska
Douglas Karr Tuesday, August 15, 2017 Saturday, February 13, 2021
5 Khaladaadka Miisaaniyadda Suuqgeynta ee laga Fogaado
Waa Maxay Sababta Aysan Marnaba U Dhicin War Saxaafadeed Adeegyada Qaybinta